Semalt को साथ रस बिल्डिंग लिंक गर्नुहोस्
Semalt को साथ जुस जुस बिल्डिंग
Seemalt ले तपाइँको दु: ख बुझ्दछ। काममा ती सबै घण्टा खर्च गर्ने पीडा तपाईको वेबसाइट उत्तम छ भनेर सुनिश्चित गर्न, र जब तपाइँ समाप्त गर्नुभयो, यस्तो देखिन्छ कि कसैले तपाइँको प्रयासलाई मान्यता दिदैन। धेरै चोटि हामीले देखेका छौं कि धेरै वेबसाइट मालिकहरू हामीसँग अलमल्ल र अज्ञात छन् किन कि तिनीहरूको वेबसाइट पहिलो पृष्ठमा नदेखाउँदा उनीहरूले सही गरेको कुरा सबै गरे पनि।
Semalt तपाईको जस्तै सयौं बार को वेबसाइटहरु देखीएको छ, र हामी तपाईको वेबसाइट पहिलो पेज मा फिर्ता पाएकोमा गर्व गर्छौं। यो गर्नका लागि, हामी निदान गर्न र आवश्यक समायोजन गर्न दुई विस्तृत विधिहरूमा भर पर्दछौं ताकि तपाईंको वेबसाइट उच्च श्रेणीकृत गर्न सक्दछ।
हामी यो वेब विश्लेषण र वेब विकास द्वारा गर्छौं। यी दुई क्षेत्रहरू तपाईंको वेबसाइटमा के गलत हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउँदछ। हामीले यो पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रा पेशेवरहरू ले समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्दछ।
वेबसाइटहरू उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भन्दा राम्रो दर्जा गर्न असक्षम हुनुको एक सामान्य कारण लि links्कहरूमा फोहर आउँछ। प्राधिकरणले SERP मा को पहिले आउँछ भन्ने दौडमा महत्व राख्दछ, र अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा तरिका अन्य आधिकारिक वेबसाइटहरूको लि ear्कहरू आर्जन गरेर हो।
गुगलले भनेको छ तपाईंको वेबसाईट रैंकलाई मद्दत गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण कारकहरू लि links्कहरू र गुणवत्ता सामग्री हुन्। गुगलले विश्वासनीय साइटहरूबाट लि links्कमा निर्भर गर्दछ। यी लिंकहरू एक संकेत हो कि यी विश्वासिलो वेबसाइटहरूले उनीहरूका स्रोतहरूमा विश्वास गर्छन्।
लिंकहरू के हुन्?
लिंकहरू ईनबाउन्ड लिंक, ब्याकलिंक्स, वा बाह्य लिंकहरू भन्न सकिन्छ। यी HTML हाइपरलिंक्स हुन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा निर्देशित गर्दछ। तपाईं इन्टरनेट को मुद्रा को रूप मा सोच्न सक्नुहुन्छ; यो रेस्टुरेन्ट वा रेफरलहरूमा ती पाँच-तारा समीक्षा जस्तै हो। के तपाईं कहिल्यै नयाँ शहर जानुभएको छ, र तपाईंले उत्तम कफी पसलको लागि सोध्नु पर्छ, र सबैले "श्री ब्राउन, कुनाको छेउमा नै।" त्यस क्षणमा, तपाई श्री ब्राउनमा राम्रा कफी पाउने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। इन्टरनेट लिंक समान प्रकार्य कार्य गर्दछ।
यहाँ त्यो परिभाषाको प्रतिनिधित्व छ। Semalt ले तपाइँको वेबसाइट बनाउँदछ, यसैले अन्य ठूला वेबसाइटहरूले तपाइँको सामग्रीको केही प्रतिलिपि गर्दछ र तपाइँको वेबसाइटको मूल सामग्रीमा लि a्क राख्छन्। यसको मतलब यो हो कि अन्य साइट भ्रमण गर्ने प्रयोगकर्ताहरू, लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईंको वेबसाइटमा टेलिपोर्ट। चियर्स, कि Semalt द्वारा एक और उपयोगकर्ता जोड़ा गया है।
मानौं तपाईं SEO को परिभाषा खोज्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंलाई साइट "A" मा लगियो, तर SEO को परिभाषा र महत्त्व बताउँदै, तपाईंलाई अझ बढि जान्नको लागि "यहाँ" क्लिक गर्न भनिन्छ। यदि तपाइँ क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ स्वचालित रूपमा नयाँ वेबसाइटमा लग्नुहुनेछ जस्तो Semalt। त्यस्तै हाइपरलिंक वा ब्याकलि does्कले गर्छ।
खोजी ईन्जिनले यी लिंकहरू वेब क्रल गर्नका लागि प्रयोग गर्दछ। यदि एक कुञ्जी शब्द खोजी गरियो भने, खोज इञ्जिनहरू काममा जान्छन् किनकि यो उत्तम विकल्प खोजी गर्दछ। तर यहाँ ब्याकलिks्कहरूको बारेमा एउटा अचम्मको कुरा हो, खोज ईन्जिनको सट्टामा उनीहरूले सर्वश्रेष्ठ जस्तो देखेको ठाउँमा रोक्न, तिनीहरू अझ ती वेबसाइटहरूमा ब्याकलि exploreहरू अन्वेषण गर्न अगाडि जान्छन्।
यस तरीकाले, तपाइँको वेबसाइट खोजीको लागि योग्य छ र सम्भवतः यसमा देखा पर्नेछ। पहिलो पृष्ठ जब खोजी परिणामहरू प्रदर्शित हुन्छन्। तर यदि तपाईं पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्न, तपाईं अन्य प्रदर्शित वेबसाइटहरू बनाउन क्लिकहरू पाउनुहुनेछ ताकि तपाईं यसलाई एक विन-विन अवस्था भन्न सक्नुहुनेछ।
आज, त्यहाँ धेरै छन्। लि building्क निर्माणको लागि प्रविधिहरू, र ती कठिनाइमा भिन्न हुन्छन्। SEO विशेषज्ञको रूपमा, हामीलाई थाहा छ कि लि building्क निर्माण हाम्रो कामको सबैभन्दा गाह्रो अंश हो। प्राय: जसो नभई, गैर-पेशेवरहरूले आफ्नो समयको बहुमतलाई सही बनाउनको लागि खर्च गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा, तपाईंले यो कार्य हाम्रो अद्भुत टोलीमा छोड्नु पर्छ जसले यसलाई कसरी राम्रो प्राप्त गर्ने जान्दछन् र अन्य महत्त्वपूर्ण चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
अन्य प्राप्त गर्न कहिल्यै सजिलो हुँदैन। वेबसाइटहरू तपाइँलाई एक विश्वसनीय स्रोतको रूपमा पहिचान गर्न। यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा, मित्रहरू भन्दा शत्रु बनाउन सजिलो छ, तर लि building्क निर्माण प्रतिस्पर्धा भन्दा अगाडि रहनको एक उत्तम तरिका रहन्छ।
Semalt ले लिंकहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्ने के के तरिकाहरू छन्? ?
यो याद राख्नुहोस्, वेबसाइट तपाईंलाई लिंक गर्न सक्षम हुनको लागि, तिनीहरू तपाईंलाई फेला पार्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। जे होस् लिंक निर्माण एक उत्कृष्ट SEO रणनीति हो, तपाईंसँग SEO का केहि प्रकारहरू पहिले नै प्रयोग गरीरहेको छ वेबसाइटहरूको लागि तपाईंको कार्य याद गर्न। सत्य भन्न सकिन्छ, ठूला र प्रतिष्ठित वेबसाइटहरु लिंक को लागी वेबसाइट खोज को लागी हिँड्ने छैन, उनीहरु तपाई लाई खोज्न को लागी सक्षम हुन को लागी आवश्यक छ। त्यो Semalt सही दिशामा औंल्याउँछ। तपाईंको लिंकहरू सुधार गर्न, Semalt ले तपाईंको SEO मा काम गर्दछ। तपाइँलाई पहिलो पृष्ठमा राखेर, अन्य वेबसाइटहरू त्यसपछि तपाइँसँग सम्बन्धित हुन चाहन्छ र त्यो राम्रो कुरा हो।
लि linked्क हुन अन्य साइटहरू द्वारा, तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट मार्फत जान वा लामो समय सम्म रहनको लागि उच्च गुणको सामग्री चाहिन्छ। यी सबै आवश्यक कारकहरू खोज ईन्जिनहरू हुन् जस्तै गुगलले वेबसाइट रैंकिंग गर्ने क्रममा विचार गर्दछ।
मद्दत गर्न को लागी र सामग्री को निर्माण गर्ने को लागी। यस लेखलाई गाईडको रूपमा लिनुहोस्। पहिलो अनुच्छेदबाट, यो स्पष्ट थियो कि यो सामग्री वेबसाइट मालिकहरूको लागि हो जुन गुणस्तरीय सामग्री मार्फत उनीहरूको र ranking्कि know कसरी सुधार गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ।
यसले अन्य वेबसाइटहरूलाई पनि तपाईंलाई फेला पार्न मद्दत गर्दछ। गुणस्तरयुक्त संरचित सामग्रीले तपाईंको वेबसाइटहरूमा पढ्नको लागि अन्य वेबसाइटहरूको लागि सजिलो बनाउँदछ र बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंले प्रदान गरिरहनु भएको प्रासंगिक छ। गुणस्तरीय संरचित सामग्रीले तपाइँ संगठित, पेशेवर र यसले दर्शकहरूलाई एक विश्वास सन्देश पठाउँदछ। भौतिक संसारमा, तपाइँ कसरी लुगा गर्नुहुन्छ तपाइँ कसरी सम्बोधन हुनुहुनेछ। इन्टरनेटमा, तपाईंको सामग्रीको संरचनाले तपाईंको दर्शकहरूले महसुस गरेको धारणा निर्धारण गर्दछ।
गुणवत्ता सामग्री भनेको वेबसाइटमा सामग्रीको व्यवस्थित व्यवस्थापन हो। Semalt सही वेबसाइटहरूमा सही चीजहरू राखेर तपाईंको वेबसाइटलाई मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको आगन्तुकहरू र खोज इञ्जिन क्रलरहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नेभिगेट गर्न सक्षम गर्दछ। यो सुविधा पछिल्लो तत्व हुनसक्दछ जुन तपाईं हराउनुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तपाईंको एसईओ कुञ्जी शव्दहरू जति उच्च छन् भन्ने कुरालाई फरक पार्दैन, यदि तपाईंको वेबसाइट सहि ढured्गले संरचना गरिएको छैन भने पत्ता लगाउन सजिलो हुँदैन।
वर्षौंदेखि, Semalt ले धेरै ग्राहकहरू र वेबसाइटहरूसँग काम गर्यो। यी बर्षहरूमा, एसईओ कीवर्डहरूको शानदार प्रयोग गर्ने वेबसाइटहरू फेला पार्न यो सामान्य भएको छ। तर यी वेबसाईटहरूले कुनै पनि ट्राफिक वा क्लिकहरू पाउँदैनन्, जुन उनीहरूको मालिकहरूका लागि गम्भीर समस्या बन्छ।
जब तपाईं एक वेबसाइट को रंग, फन्ट शैली, र ग्राफिक्स दूर ले, तपाईं बाँकी सबै संरचना छ।
गुगलको एल्गोरिथ्मले खोजीबाट जानकारी सlects्कलन गर्दछ र तपाईंको डाटालाई साइटमा वर्गीकरण गर्न यो डाटा प्रयोग गर्दछ। यो कसरी कार्य गर्दछ कि यदि प्रयोगकर्ताले तपाईंको साइट फेला पार्छ, SERP वा तपाईंको खोजी ईन्जिनहरूले यो प्रयोगकर्ताहरू साइटमा कति लामो समयसम्म रहन्छ भनेर अनुगमन गर्दछ। राम्रो संरचित वेबसाइटले आगन्तुकलाई साइटमा लामो समयसम्म रहन दिन्छ जहाँ कमजोर संरचित साइटले पाठकलाई छोड्छ।
तपाइँको सबै वेबसाइटहरूमा तपाइँको वेबसाइट रैंकिंग सुधार गर्नका लागि उत्तम तरिकाहरू पत्ता लगाई, के तपाइँले संक्षिप्त EAT भेट्नुभयो? यो विज्ञ, प्राधिकरण, र भरोसा योग्यको लागि खडा छ। साइट जसले यी सुविधाहरू प्रदर्शन गर्दैनन् खोज ईन्जिनहरूमा अवर गुणवत्ताको रूपमा देखिन सकिन्छ। तर जसले यस विशेषता प्रदर्शन गर्छन् उनीहरूलाई VIPs जस्तै राम्रो उपचार दिइन्छ।
EAT लि building्क निर्माणको लागि दुई तरिकामा महत्त्वपूर्ण छ।
EAT तपाईंको साइटमा, र EAT साइटहरूमा जुन तपाईंलाई पछाडि लिंक गर्दछ।
तपाईंको साइटमा EAT
यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंको खोजी ईन्जिन र अन्यलाई आश्वासन दिन्छ। वेबसाइटहरू जुन तपाईं विश्वासनीय हुनुहुन्छ। यो तपाईको लागि फाइदाजनक छ किनकि तपाईले तपाईको स्तर निर्धारण मात्र गर्नुहुन्न तर तपाईको ब्याकलिks्क पनि पाउनुहुन्छ। हामीले माथी दिएका कफि शपको उदाहरणमा, एक विश्वसनीय साइटले अन्य वेबसाइटहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा लिंकहरू प्रयोग गर्दछ। Google, अर्कोतर्फ, तपाईंको अधिकार र अतिरिक्त क्लिकहरू तपाईं यी लि from्कहरूबाट प्राप्त र तपाईं राम्रो क्रममा पहिचान गर्दछ। यो तपाइँको लागि सबै पक्षमा एक जीत हो।
EAT होस्ट साइटमा
नयाँ वेबसाइटको रूपमा तपाई नहुन सक्नुहुन्छ। खेलमा लामो तपाईं पर्याप्त र एक राम्रो प्रतिष्ठा स्थापना गर्न को लागी। तर यदि एक विश्वसनीय EAT वेबसाइटले तपाइँको वेबसाइटलाई लिंक गर्दछ भने, Google लाई स्वचालित रूपमा थाहा हुन्छ कि तपाइँ भरोसायोग्य हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, उहि फेदरका चराहरू सँगै भेला हुन्छन्। अधिकारीहरूको विश्वास कमाउन तपाईलाई वेबसाइटबाट लि need्कहरू चाहिन्छ जोसँग पहिले नै स्थापित अधिकार रहेको छ।
Semalt ले तपाईंलाई आफ्नो साइटमा यो लेबल नराख्ने मात्र होइन तर तपाईं लायक हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गरेर विश्वासयोग्य बन्न पनि मद्दत गर्दछ। हाम्रो शीर्ष-गुणवत्ता सामग्री, गुणवत्ता संरचित डाटा र एसईओको प्रथम-वर्ग प्रयोगको साथ, अन्य वेबसाइटहरूले तुरून्त तपाईंको वेबसाइटलाई बिभिन्न, व्यावसायिक र केहि सम्बन्धित हुन मान्यता दिन्छ।
< div> लिंक निर्माण गर्न केही गाह्रो हुन सक्छ किनकि नयाँ वेबसाइटको रूपमा, कसैले तपाईंलाई राम्रोसँग चिन्दैन। यो किन यति महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले Semalt ले तपाईंलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि वेबसाइटलाई समयको परीक्षणले बाँच्नको लागि यससँग यी लिंकहरू हुनु आवश्यक छ। तिनीहरूले भर्खरको मात्र देखाउँदैनन् कि तपाईं भरोसायोग्य हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूले तपाईंलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो वेबमा पनि जडान गर्छन्। यस कारणले गर्दा तपाईंलाई यी ब्याकलिks्कहरू आवश्यक छ। तिनीहरूले असंख्य सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटलाई र get्कित गर्दछ र तपाईंलाई कल्पना गरेभन्दा बढी ट्राफिक दिन्छ। हाम्रो शानदार ट्र्याक रेकर्डको साथ, र केवल उत्तम प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमताको साथ, अन्य वेबसाइटहरूले तपाईंलाई विश्वासनीयको रूपमा पहिचान गर्दछ।
आज हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् ...